ရောင်းချသူ: Nisis Lay
ရောင်းစရာနည်းနေလို့ပါ။ဖုန်းဝယ်သည်။(အမြင့်ဖုန်းများဦးစားပေး)(Ph-09965086761,09443011770)Nisis Lay mobile #ပုံရောဈေးနှုန်းတွေရောအပြည့်အစုံရေးထားပါတယ်။။အလုံးသန့်Errorကင်းများသာရောင်းပါတယ်။ဈေးတွေလဲထပ်လျှော့ပေးထားတယ်ဗျ။Last price ပါ။အလဲအထပ်ရပါတယ်။ Samsung Galaxy Note 8 Maple Gold 2sim, Ram6/64GB.99%new.။Official Showroomအလုံးပါ။Myanmar zawgyi officialပါပြီး။With original charger only.(Original fast chargerပါ).
Price-770000ks. Samsung Galaxy S8+ Maple Gold 2sim.Ram4GB/64GB.99.999%new.အသစ်တိုင်း။Showroom warranty 5လ ကျန်။All acc & Box.
Price-680000ks. iphone 7plus 256GB Mattblack. refurမထွက်တဲ့ TH/A 99%new.12သိန်းကျော်ဖြင့်ဝယ်ထားသောWaiyan ဘောက်ချာပါမည်။No error/no icloud.All acc & Box.
Price-790000ks. Iphone 4s 16GB White & Black ရမယ်။ZP/A,CL/A,CH/A.Original Display,Original Body.98%/99%new.Official second အလုံးလေးတွေ(No refurbuish)No error,no icloud.All acc & Box.
Price-65000ks. Sony Xperia XZ Premium Deepsea Black.သူလဲမှန်ကြည့်လို့ရတယ်။Dual sim.မြန်မာစာပါပြီး။ရေစိုခံအလုံးသန့်။Ram4GB/64GB.Sd 835 CPU.လက်ရှိShowroomဈေး။849000ပါ။
Price-490000ks. Miထဲကအလန်းလေးတလုံယရောက်တယ်။Mi note 2မှန်အခုံးလေး။စထွက်တော့၈သိန်းကျော်တယ်နော်။Mi note 3ထက်ဈေးလဲပိုကြီးသလိုအဆပေါင်းများစွာသာပါတယ်။5.7" AMOLED display.Mi ထဲမှ၊AMOLED displayနဲ့က Mi 8 ရယ်Mi note2ရယ်ပဲရှိပါတယ်။ရုပ်ထွက်ရှယ်။Snapdragon 821CPU,Ram6GB/128GB.99.9%new.Accတွေမသုံးထားပါ။Original coverအကြည်လေးလဲပါတယ်။All acc & Box.
Price-355000ks. Redmi S2 Gray.ပေါ်တာမကြာသေးပါ။Ram4GB/64GB.ပါကင်ဖောက်စစ်။အသစ်တိုင်း။Accတွေမသုံးထား။All acc & Box.
Price-200000ks. Mi note Bamboo Edition 3GB/16GB 4G dual sim.Brand newတွေပါ။All acc & Box.
Price-124000ks. Huawei Honor 4X Ram2GB Gold, 4G Dual sim. Honor 4X seriesထဲမှာအမြင့်ဆုံးAll network support.CDMA/4Gဘာကဒ်ထည့်ထည့်ရတယ်။Brand newတွေပါ။
Nisis Lay mobile